आमा हतार भइसक्यो, म गएँ है १’ अनिता जुत्ताको तुना कस्तै बाहिरबाट कराइन् ।
‘तँलाई टाइममा पकाएर रेडी गरेकै थिएँ त । खानु छ चराको जति, खान लाग्छ एक घन्टा । अब फाइनल परीक्षा छ ढिलो गर्ने भई,’ आमाले झ्यालको पर्दा हटाएर अलि ठूलै स्वरमा कराउनुभयो, ‘अल द बेस्ट, नआत्तिई बिस्तारै जा ।’
‘हस् आमा, थ्यांक्यु’ साइकलमा चढ्दै अनिताले भनिन् र स्कुलतिर हिँडिन् । बाटोमा सुनिता र बिमलासँग भेट भयो । उनीहरू पनि हतार भयो भन्दै डराइरहेका थिए । साइकल दौडाएर हिँडिरहेका उनीहरूले बाटोमा लडिरहेका एक वृद्ध मान्छे देखे । उनी बाटोको छेउमा घोप्टो परेर लडिरहेका थिए । उनको निधार र कुहिनोमा चोट लागेको रहेछ । रगत बगिरहेको थियो ।
‘बाइकले ठक्कर दिएर भागेको हुनुपर्छ,’ उनीहरूले अड्कल काटे । स्कुल जाने बाटो अलि कोल्टेतिर पर्ने हुनाले त्यति गाडीहरू गुड्दैन थिए । उनीहरूले उठाएर रूखको फेदमा राखे । आफूसँग भएको रुमाल झिकेर रगत बगिरहेको ठाउँ पुछेर बाँधिदिए । मद्दत लिन उनीहरूले कोही पाएनन् । स्कुल पनि ढिला भइसकेको थियो ।
सुनिताले अलि हड्बडाएर भनिन्, ‘परीक्षा सुरु भै सक्यो होला, फेरि फाइनल परीक्षा दिन पाइएन भने त अर्को साल पनि यही कक्षामा बस्नुपर्ने हुन्छ, म त जान्छु ।’
बिमलाले पनि होमा हो मिलाइन्, ‘हो हो, हामी स्वास्थ्य चौकीसम्म पनि त लान सक्दैनौं, के गर्नु बेकारमा बसेर ?’
अनितालाई भने घाइतेलाई छोडेर जान मन थिएन । ‘त्यस्तो होइन हेर, बरु हामी तीनजना मिलेर साइकलमा लिएर जाऔं, स्वास्थ्य चौकी कति टाढा छ र ? बाटोमा कोही भेटे हेल्प लिऔँला,’ उनले भनिन्, ‘कोही आपत्मा छ भने यसै छोडेर हिँड्नुहुन्न । एक्जामका लागि त टिचरहरूसँग रिक्वेस्ट गरौँला नि ।’
‘सरी यार, तेरो कुरा सही हो । ल बरु ढिला नगरौँ बिमला साइकल डोहोर्‍या, हामी पिछाडिबाट समाउँछौं,’ सुनिताले भनिन् । उनीहरूले अरू दुइटा साइकल त्यहीँ लक गरेर राखे अनि छिटछिटो गरेर स्वास्थ्य चौकीतिर लागे ।
स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जले भन्नुभयो– ‘घाउमा रुमालले बाँधिदिएकोले रगत बग्न पाएनछ, तपाईंहरूले राम्रो काम गर्नुभयो । रगत धेरै बगेको भए जे पनि हुन सक्थ्यो ।’ स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याएपछि उनीहरू ढुक्क भएर स्कुलतिर कुदे । स्कुल पुग्दा परीक्षा सकिन लागिसकेको थियो । उनीहरू खुरुखुरु प्रिन्सिपल सरको रुममा गए र सबै बेलिबिस्तार सुनाए । उनीहरूको सहयोगको भावना देखेर प्रिन्सिपल सर केही बोल्न सक्नुभएन । पालेदाइलाई बोलाएर परीक्षा सकिएपछि सबै शिक्षक विद्यार्थीलाई ग्राउन्डमा बोलाउन अह्राउनुभयो । सबैको अगाडि उनीहरूलाई भन्नुभयो– ‘तिमीहरूले आज जो गरेका छौ, यो प्रशंसनीय काम हो । यो अरूको मद्दत गर्ने भावना कहिल्यै नमरोस् । तिमीहरूलाई मेरो आशीर्वाद र शुभकामना छ । यो परीक्षा त के भयो र ? व्यवस्था मिलाउँला । तर तिमीहरू आज जिन्दगीको परीक्षाबाट पास भएका छौ । स्कुले परीक्षाबाट सबै पास होलान् तर जिन्दगीको परीक्षाबाट जो कोही पास हुन सक्दैन ।’
प्रिन्सिपल सरले धाप मारिरहनुभएको थियो । साथीहरूले गड्गडाहट ताली दिइरहेका थिए ।
प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ १०:४१
हजुरबाले चुरोटबट्टा बाल्नुभयो निबाले पनि खैनीको प्याक फाल्नुभयो निकाका पनि अबदेखि रक्सी नखानेठूलोदाइ नि जुवातासको खालमै नजानेभन्नुहुन्छ सानोदाइ नि ‘कहिल्यै नढाँट्ने’दिदी पनि सुध्रने रे ‘कुरा नकाट्ने’
भाइले पनि बाआमालाई काम सघाउने
स्कुल छुट्टी भएपछि सिधै घर आउने
म पनि त केही सिक्दा कहिल्यै नहार्ने
‘पैसा १’ भन्दै आमालाई पीर नपार्ने
यो दसैंमा यस्तै भयो हाम्रो निर्णय
भन साथी तिम्रोमा नि यस्तै क्यै भए